မိန်းကလေး တွေက အသက်ကြီးတဲ့ယောက်ျားတွေကိုပို သဘောကျရတဲ့ အကြောင်းရင်း - Focus Myanmar
မိန်းကလေး တွေက အသက်ကြီးတဲ့ယောက်ျားတွေကိုပို သဘောကျရတဲ့ အကြောင်းရင်း
April 15, 2019 By Myanamr Plus in အချစ်ဆိုင်ရာ Tags: ကတိ, မိန်းကလေး
အသက်ကြီးတဲ့ ယောက်ျားလေး တွေနဲ့ဆို မိန်းကလေးတွေဟာ မှီခိုအားထားစရာကောင်းပြီး လုံခြုံ တယ်လို့ခံစားရလို့ပါပဲ။ ဒီအချက်ကြောင့် ထိုယောက်ျားတွေဆီက ရုန်းမထွက်ချင်ဘူး။ အကောင်းဆုံးတွေကိုသာ ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ မိန်းကလေး တွေသိနေလို့ပေါ့။ သူတို့ကတည်ငြိမ်တယ်၊ ရင့်ကျက်တယ်။ ပေးပြီးသား ကတိ ကိုလည်း တည်မြဲစေတယ်။ အခုခေတ်လူငယ်ကောင်လေးတွေလို ပေါ့တီးပေါ့ပျက်မနိုင်ဘူး။ဒီတော့ပိုပြီး သူတို့ကိုမိန်းကလေးတွေ သဘောကျရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့…
ခုခေတ်မှာလို အရူးလုပ်တာတို့၊ စိတ်ကစားတာတို့လို ကလေးဆန်တဲ့အလုပ်တွေသူတို့မလုပ်တော့ဘူး။ အသက်ရွယ်အရ တည်ငြိမ်၊ ရင့်ကျက်လာပြီ။ သင့်တော်မယ့် မိန်းကလေးနဲ့အတည်တကျလက်တွဲဖို့သာ သူတို့စဉ်းစားတော့တယ်။ ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ လူကြီးတွေဖြစ်ချင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သည်းသည်းလှုပ်ချစ်ပြတတ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့အမူရာတွေကြောင့် သင်စိတ်လှုပ်ရှားရဦးမှာပါ။
ယောက်ျားလေးတွေ လှတာကြိုက်သလို၊ မိန်းကလေးတွေလည်း ချောမောတဲ့ယောက်ျားလေးဆို သဘောကျပါတယ်။ အရမ်းချောမောတာထက် မိန်းကလေးတွေကို ပိုပြီးဆွဲဆောင်နိုင်တာက တည်ငြိမ်မှုပါပဲ။ အရမ်းဂနာမငြိမ်ဖြစ်လွန်းတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေကို မိန်းကလေးတွေသဘောမကျဘူး။
ကြိုက်မိသွားရင်တောင် ဘဝလက်တွဲဖော်အဖြစ် သူတို့ရွေးချယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ မချောရင်တောင် တည်ငြိမ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုပဲ မိန်းကလေးတွေနှစ်သက်တယ်။
ဒီအကြောင်းပြချက်ပဲ မိန်းကလေးတွေသဘောကျတာပေါ့။ တစ်ခုခုဆို ရှေ့ကလမ်းပြနိုင်တယ်။ ကူညီပေးနိုင်တယ်၊ လဲကျသွားရင် ပြန်ထဖို့ ဘေးနားက အဆက်မပြတ်အားပေးနေတယ်။ သူတို့က ကိုယ့်ထက် အတွေ့အကြုံတွေပိုများတော့ အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေပေးနိုင်ပါတယ်။
မိန်းကလေး ငယ်ငယ်လှလှချောချောလေးတွေကို လူတိုင်းသဘောကျပေမယ့် သူတို့ကတော့ အပေါ်ယံအလှတရားတွေထက် စိတ်ဓာတ်၊ ကိုယ်ကျင့်တရားကိုသာကြည့်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ စိတ်သဘောထား၊ စရိုက်အနေထားတူညီရင် ဒီမိန်းကလေးနဲ့တင် ပြည့်စုံပါပြီ။ ငယ်ငယ်ကသာ ရူးမိုက်ပြီး ရည်းစားတွေများရင်များခဲ့ဖူးမယ်။ အခုချိန်မှာတော့ တကယ်သဘောကျတဲ့မိန်းကလေးနဲ့သာလျှင် တည်ငြိမ်စွာ သူနေလိုတော့တယ်။
အသက်ကြီးတဲ့ယောက်ျားတွေဆို မိန်းကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ အမြဲတမ်း သြဇာ အာဏာညောင်းတဲ့လူတွေအဖြစ် စိုးမိုးထားပါတယ်။ ကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင် ရှောင်မပြေးသွားဘဲ တာဝန်ယူဖြေရှင်းတယ်။ သင့်ကို အမြဲကာကွယ်ပေးဖို့ အသင့်ရှိသူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း မိန်းကလေးတွေနှလုံးသား အရည်ပျော်ရတာပေါ့။
အသက်ကြီးတဲ့ ယောက်ျားတွေဟာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်တစ်ခုမှာ အခြေတစ်ကျရှိပြီး ငွေရေးကြေးရေးကလည်း တည်မြဲလာပြီ။ ဒီအချက်ကိုတော့ ဘယ်မိန်းကလေးက ငြင်းနိုင်မှာလဲ ? တကယ်သဘောကျလို့ ရွေးချယ်ထားတဲ့မိန်းကလေးကို ဘယ်တော့မှလည်းလမ်းခွဲဖို့မစဉ်းစားဘူး။
ကလေးတှကေ အသကျကွီးတဲ့ယောကျြားတှကေိုပိုသဘောကရြတဲ့ အကွောငျးရငျး
အသကျကွီးတဲ့ယောကျြားလေးတှနေဲ့ဆို မိနျးကလေးတှဟော မှီခိုအားထားစရာကောငျးပွီး လုံခွုံတယျလို့ခံစားရလို့ပါပဲ။ ဒီအခကျြကွောငျ့ ထိုယောကျြားတှဆေီက ရုနျးမထှကျခငျြဘူး။ အကောငျးဆုံးတှကေိုသာ ပေးနိုငျတယျဆိုတာ မိနျးကလေးတှသေိနလေို့ပေါ့။ သူတို့ကတညျငွိမျတယျ၊ ရငျ့ကကျြတယျ။ ပေးပွီးသား ကတိကိုလညျး တညျမွဲစတေယျ။ အခုခတျေလူငယျကောငျလေးတှလေို ပေါ့တီးပေါ့ပကျြမနိုငျဘူး။ဒီတော့ပိုပွီး သူတို့ကိုမိနျးကလေးတှေ သဘောကရြတဲ့အကွောငျးရငျးတှကေတော့…
ခုခတျေမှာလို အရူးလုပျတာတို့၊ စိတျကစားတာတို့လို ကလေးဆနျတဲ့အလုပျတှသေူတို့မလုပျတော့ဘူး။ အသကျရှယျအရ တညျငွိမျ၊ ရငျ့ကကျြလာပွီ။ သငျ့တျောမယျ့ မိနျးကလေးနဲ့အတညျတကလြကျတှဲဖို့သာ သူတို့စဉျးစားတော့တယျ။ ပငျြးစရာကောငျးတဲ့ လူကွီးတှဖွေဈခငျြဖွဈလိမျ့မယျ။ သညျးသညျးလှုပျခဈြပွတတျမှာ မဟုတျဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူတို့အမူရာတှကွေောငျ့ သငျစိတျလှုပျရှားရဦးမှာပါ။
ယောကျြားလေးတှေ လှတာကွိုကျသလို၊ မိနျးကလေးတှလေညျး ခြောမောတဲ့ယောကျြားလေးဆို သဘောကပြါတယျ။ အရမျးခြောမောတာထကျ မိနျးကလေးတှကေို ပိုပွီးဆှဲဆောငျနိုငျတာက တညျငွိမျမှုပါပဲ။ အရမျးဂနာမငွိမျဖွဈလှနျးတဲ့ ယောကျြားလေးတှကေို မိနျးကလေးတှသေဘောမကဘြူး။
ကွိုကျမိသှားရငျတောငျ ဘဝလကျတှဲဖျောအဖွဈ သူတို့ရှေးခယျြမှာမဟုတျပါဘူး။ မခြောရငျတောငျ တညျငွိမျတဲ့ယောကျြားတဈယောကျကိုပဲ မိနျးကလေးတှနှေဈသကျတယျ။
ဒီအကွောငျးပွခကျြပဲ မိနျးကလေးတှသေဘောကတြာပေါ့။ တဈခုခုဆို ရှကေ့လမျးပွနိုငျတယျ။ ကူညီပေးနိုငျတယျ၊ လဲကသြှားရငျ ပွနျထဖို့ ဘေးနားက အဆကျမပွတျအားပေးနတေယျ။ သူတို့က ကိုယျ့ထကျ အတှအေ့ကွုံတှပေိုမြားတော့ အကွံဉာဏျကောငျးတှပေေးနိုငျပါတယျ။
မိနျးကလေး ငယျငယျလှလှခြောခြောလေးတှကေို လူတိုငျးသဘောကပြမေယျ့ သူတို့ကတော့ အပျေါယံအလှတရားတှထေကျ စိတျဓာတျ၊ ကိုယျကငျြ့တရားကိုသာကွညျ့ပါတယျ။ သူတို့နဲ့ စိတျသဘောထား၊ စရိုကျအနထေားတူညီရငျ ဒီမိနျးကလေးနဲ့တငျ ပွညျ့စုံပါပွီ။ ငယျငယျကသာ ရူးမိုကျပွီး ရညျးစားတှမြေားရငျမြားခဲ့ဖူးမယျ။ အခုခြိနျမှာတော့ တကယျသဘောကတြဲ့မိနျးကလေးနဲ့သာလြှငျ တညျငွိမျစှာ သူနလေိုတော့တယျ။
အသကျကွီးတဲ့ယောကျြားတှဆေို မိနျးကလေးတှရေဲ့စိတျထဲမှာ အမွဲတမျး သွဇာ အာဏာညောငျးတဲ့လူတှအေဖွဈ စိုးမိုးထားပါတယျ။ ကိစ်စတဈခုခုဖွဈရငျ ရှောငျမပွေးသှားဘဲ တာဝနျယူဖွရှေငျးတယျ။ သငျ့ကို အမွဲကာကှယျပေးဖို့ အသငျ့ရှိသူတဈယောကျပါ။ ဒါကွောငျ့လညျး မိနျးကလေးတှနှေလုံးသား အရညျပြျောရတာပေါ့။
အသကျကွီးတဲ့ ယောကျြားတှဟော အသကျမှေးဝမျးကွောငျး အလုပျတဈခုမှာ အခွတေဈကရြှိပွီး ငှရေေးကွေးရေးကလညျး တညျမွဲလာပွီ။ ဒီအခကျြကိုတော့ ဘယျမိနျးကလေးက ငွငျးနိုငျမှာလဲ ? တကယျသဘောကလြို့ ရှေးခယျြထားတဲ့မိနျးကလေးကို ဘယျတော့မှလညျးလမျးခှဲဖို့မစဉျးစားဘူး။